Global Voices teny Malagasy » Japana: Ny Zotra Haingam-pandeha ao Yamanote · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Aogositra 2017 19:20 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Salzberg Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Mediam-bahoaka, Voina
(Marihina fa tamin'ny 15 Novambra 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Tany am-piandohan'ity herinandro ity, mpiasa handeha hiasa miisa 20.000 teo ho eo tao Tokyo no voatery niandry 20 minitra rehefa nisy vehivavy iray 40 taona nanomboka nihazakazaka rehefa avy nitsambikina teo amin'ny lalambin'ny Zotra Yamanote  [ja], iray amin'ireo lalamby be mpampiasa indrindra ao an-tanàndehibe. Voalaza fa noho ny vokatry ny olana nisy teo amin'ny olom-pantany [ja], dia nihazakazaka avy teo amin'ny garan'i Yoyogi nankany amin'ny garan'i Harajuku mirefy iray kilaometatra sy sasany ilay vehivavy izay nolazain'ny maro ho voalohany tamin'ity karazany ity. Mazava ho azy fa maro no nanontany tena hoe inona no tena noeritreretin'ity vehivavy ity ho atao.
Nanazava ny zava-nitranga  ary nanome ny heviny ilay bilaogera a-usa:
Nandeha ny feo rehetra momba ity vehivavy iray ity izay nanao “tongotra ankatoka” teo amin'ny zotra JR Yamanote manelanelana ny garan'i Yoyogi sy Harajuku (tokony ho 1.5 km) tamin'ny harivan'ny faha 11 Novambra. Araka ny fanadihadiana nataon'ny paositry ny polisy ao Shinjuku, nanana olana tamin'ny olom-pantany ilay vehivavy taloha kelin'ilay zava-nitranga, ary rehefa niala tao amin'ny garan'i Yoyogi izy dia nitsambikina teny amin'ny lalamby …
Ny mpamily ny fiarandalamby iray izay nandalo ilay vehivavy no nahita azy nihazakazaka teny amin'ny lalamby, ary nampandre ny tompon'andraikitra mba hanakatona haingana ny fifamoivoizana ary nanajanona avy hatrany ny fiarandalamby .
Tena tantara mahavariana no nitranga. Tsy hanao izany mihitsy aho, mihazakazaka 1,5 kilometatra eo amin'ny lalamby.
Ary ankoatra izany, milaza ny olona fa 45 taona ilay vehivavy, izay tena nahagaga ahy .
Tsy maintsy ho gaga ihany koa ilay mpamily ny fiarandalamby. Tena tantara tsy mampino izany.
Raha izaho no mpamily, azoko antoka fa nihevitra ilay vehivavy ho angatra na matoatoa aho.
Fa inona no tena nataon'ity vehivavy 45 taona ity? Satria tsy dia salama saina loatra izy , tsy niampanga azy izy ireo fa nanolotra azy tany amin'ny fianakaviany, kanefa tena ampy ve izany? Raha nolazaina ho tsy salama saina izy, tsy fantatra hoe hatraiza no tena maha-adala azy, ary tsy azo heverina, avy amin'izay fantatra, mba hitsarana azy.
Misy ny trangan-javatra hafahafa toy izany .
Tsy fantatro izay nitranga [taminy], kanefa tsy tokony hametraka olana ho an'ny olon-kafa ny olona. (TPT)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/23/106199/
 vehivavy iray 40 taona nanomboka nihazakazaka rehefa avy nitsambikina teo amin'ny lalambin'ny Zotra Yamanote: http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/accident/100098/
 vokatry ny olana nisy teo amin'ny olom-pantany : http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071112-00000935-san-soci
 Nanazava ny zava-nitranga: http://ameblo.jp/a-usa/entry-10055164881.html